China kokudidiyela Ukuhlolwa Abakhiqizi futhi Suppliers | CCIC
DLULA ISIQINISEKISO SOKUGCINA
UKUTHOLWA KOMKHAYA WOKUQALA
I Oku-Production Ukuhlolwa (PPI) ebizwa nangokuthi ukukhiqizwa kokuqala, kuyinto t yena Ukuhlola kokuqala nge ekuhlolweni enemininingwane nokuhlolwa of izinto zokusetshenziswa kanye izingxenye .Kubonakala kwenzeka lapho ukuhlonza kanye nokuhlola entsha umthengisi / imboni kwakho sekuqediwe futhi ngaphambi kokuqala kokukhiqizwa kwenqwaba. Ukuhlolwa Kwangaphambi Kokukhiqiza kuqinisekisa ukuthi umphakeli wakho uyakwazi ukuqala ukukhiqizwayo ngohlelo futhi imininingwane yakho iyaqondakala efekthri nasekuvimbeleni noma yikuphi amaphutha angaba khona ezinsizakalweni zokukhiqiza, izinto zokwakha, amashejuli, ukuphatha nokuningi. Sizobuye sibheke ikhwalithi yezakhi, izinto zokwakha, nezinto zokusiza ekuqaleni komkhiqizo kuqhathaniswa nokucaciswa kwamakhasimende kanye / noma amasampula enkomba.
Amaphoyinti wethu wokuhlola abalulekile ngezansi:
Ikhwalithi ye-1.Bheka inani nenani lezinto ezingavuthiwe nezakhi;
2.Mainly Bona umthamo wokukhiqiza wefekthri nekhono lokulawula ikhwalithi;
3.Also hlola eminye imikhiqizo eseqedile nemikhiqizo eqediwe Semi;
4.monitor uhlelo lokukhiqiza;
Kungani kufanele ngidinge Ukuhlolwa Kokukhiqiza Kwangaphambili?
Ngaphambi ukukhiqizwa, uyakusiza uqiniseke ukuthi izinto zokusetshenziswa kanye izingxenye uzohlangana Ukucaciswa yakho futhi kuyatholakala uma izinto eziningi ezanele ukuze kuhlangatshezwane sinomsebenzi omningi.
- Gwema ukungaqondi.
- Qiniseka ukuthi izidingo zakho ziyaqondakala kahle.
- Gwema ukusetshenziswa kwezinto ezingalungile, imibala engalungile njll, qinisekisa ukuthi imininingwane yakho yomkhiqizo ihlangatshezwa kusenesikhathi.
- Sebenzisa izindlela zokulungisa ngokushesha okukhulu.
- Gwema izindleko ezingalindelekile & ukubambezeleka.
Okuningi okuvela kumacala wethu wokufaka amakhasimende
Ukulungele ukuthola okuningi? Xhumana nathi ukuthola isilinganiso!
Previous: Isevisi yokuhlola
Olandelayo: Isitsha Iyalayisha Ukugada
Definition Of Ukuhlolwa
Ukuhlolwa Ngo-Quality Control
Ukuhlolwa Quality Control
Material Testing Futhi Ukuhlolwa
Ukuqinisekiswa kwekhwalithi Ukuhlolwa
Izinsiza Zokuthengiswa Kwezimpahla
Cargo Judicial Isazi Services